छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु, तीन घाइते - inaruwaonline.com
छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु, तीन घाइते
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ११, २०७३ समय: १५:५१:५६
राजविराज, ११ असोज । सप्तरीमा छुट्टाछुट्टै घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् ।
जिल्लाको सिम्राहासिग्यौन गाविस–८ मा मोबाईल चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर स्थानीय रामअधिन यादवको १४ वर्षीय छोरा भोलानाथ यादवको मृत्यु भएको छ । आफ्नै घरमा मोवाईल चार्ज गर्न खोज्दा विद्युतको तार सर्ट भई करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते यादवको उपचारको क्रममा राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै पूर्व पश्चिम लोकराजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका–६ मा मोटरसाइकलले ठक्कर दिदा शम्भुनाथ नगरपालिका–८ बस्ने ५० वर्षिय बिष्णुदेव पासवानको मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले जनाएको छ । गत शनिबार विहान पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जादै गरेको स. ३ प ३२२७ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट टाउकोमा चोट लागेको पासवानको उपचारको क्रममा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको हो । ठक्कर दिने मोटरसाइकललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी पूर्व पश्चिम लोकराजमार्गमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी एक बालकसहित तीन जना घाइते भएका छन् । राजमार्ग अन्तर्गत रायपुर गाविस–८ रुपनीमा को २२ प ९६३६ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिदा स्थानीय ११ वर्षिय धिरज यादव घाइते भएका छन् । बाटो काट्ने क्रममा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जादै गरेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको हो । टाउको र शरिरमा चोट लागेको यादवलाई उपचारका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ भने ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालक इलाका प्रहरी कार्यालय रुपनीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी शम्भुनाथ नगरपालिका–६ मा पश्चिमबाट आउदै गरेको बा. २४ प. ८८२१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा सवार शम्भुनाथ नगरपालिका–८ बस्ने २८ वर्षिय सुन्दर सदा र शम्भुनाथ नगरपालिका २ बस्ने १५ वर्षिय शंकर सदा घाइते भएका हुन् । घाइते दुबैको उपचार न्युरो अस्पताल विराटनगरमा भइरहेको छ ।